Fifidianana loholon’i Madagasikara: Ahiana ho sandaina lafo indray ireo mpifidy
jeudi, 10 septembre 2020 21:12
Tapaka fa ho tanterahana ny 11 desamba ho avy izao ny fifidianana ny loholon’i Madagasikara.
Namoaka ny didim-panjakana manainga ny mpifidy hanefa ny adidiny mifanandrify amin’izany ihany koa ny governemanta.
Ny mpanolotsain’ny tanàna sy ny ben’ny tanàna ary ny governora (izay misahana vonjimaika ny andraikitry ny lehiben’ny faritra) no mandrafitra ny kolejin’ny mpifidy vaventy eran’ny Nosy.
Anisan’ireo mpifidy ihany koa, araka ny voafaritry ny lalàna ihany koa, ny mpanolotsaim-paritra sy ny lehiben’ny Faritany ary ny mpanolotsaim-paritany.
Tsy mbola mipetraka eo amin’ny toerany anefa izy ireo hatramin’izao, raha didian'ny Lalampanorenana ho fidiana avokoa ireo.
Azo antoka fa ho mafy ny fifaninana amin’ity indray mitoraka ity ka ahiana ho mety ho sandaina lafo ireo mpifidy vaventy ireo.
Noferana ho 18 ny isan’ny Loholon’i Madagasikara izay handrafitra ny Antenimierandoholona manomboka izao, araka ny lalàna vaovao izay mbola miteraka resabe hatramin’izao.
Ny faritany 6, izay tsy misy akory ireo rafitra momba azy ve, no nifidianana ilay isa 3 isaky ny Faritany, nefa ny Loholona no misolo sy miaro ny vondrom-paritra izay misy 22 ny faritra.
23 akory aza araky ny fampanantenan'ny filoha izay efa misoratra anaty tetibolam-panjakana, nefa tamin'ny nanendry governora dia nitambatra ihany Vatovavy Fitovinany.
Hatreto tsy mbola voatendry ny governora 4 ambiny, efa higadona ihany ny herin-taona nanaovana letrezana ny fametrahana ny governora izay tsy voafaritry ny Lalampanorenana.
Ireo mpifidy vaventy no mifidy ny roa ampahatelony, izany hoe : ny 12 amin’izy ireo, raha ny filoham-pirenena kosa no manendry ny iray ampahatelony, izany hoe : ny 6 ambiny, araka ny andininy faha-81 ao amin’ny Lalampanorenan’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Mbola io andininy io ihany no milaza fa mitovy ny isan’ny Loholona fidiana isaky ny Faritany.
Izany hoe ho roa isaky ny faritany ny isan’ny loholona hofidiana amin’ny 11 desambra.
Nosandaina volabe ireo mpifidy vaventy nandritra ny fifidianana Loholona tamin’ny desambra 2015.
Notambazana vola an’hetsiny mihitsy izy ireo tamin’izany na dia am-polony maro fa tsy 12 fotsiny toy ny ankehitriny aza ny isan’ny toerana nifandrombahana tamin’izany.
Koa satria 12 monja no toerana hifandrombahana amin’io fifidianana ho avy io dia ahiana fa hiakatra ambony ny tolotra ho an’ireo mpifidy vaventy. Mety hisy, toy ny teo aloha, aza ny tery tsy hanomezana famatsiam-bola ho an'ny Kaominina izay Ben'ny tanàna ratsy fidy, raha ny fomba nahazatra hatramin'izay.
Tsiahivina fa nofidian’ny olompirenena mivantana ireo mpanolotsain’ny tanàna sy ny Ben’ny tanàna izay lasa mpifidy vaventy ireo tamin’ny 27 novambra lasa teo.
Avy amin’ny antokon’ny fitondrana ny maro an’isa amin’izy ireo.
Olom-boatendry kosa ny governoram-paritra ary dia efa azo sary an-tsaina sahady ny fironan’ny safidin’izy ireo any amin’ny latsabato.
Manontany tena ny maro hoe, atao inona andaniam-bola be moa ny fifidianana azy ireo, fa tsy naleo ve avy dia notendrena ihany koa, efa fitsitsiam-bola ihany no nolazana fa ampihenana ny isan'ireto Loholona ireto.